Valverde oo ka hadlay guushii ay xalay ka gaareen Leganes iyo dhaawaca soo gaaray Ousmane Dembélé – Gool FM
(La Liga) 21 Jan 2019. Macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guushii 3-1 hayd ay kaga gaareen Leganes, kulankoodii 20-aad ee horyaalka La Liga ay xalay ku wada ciyaareen garoonka Cump Nou.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay Ernesto Valverde kadib ciyaarta waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Waxaan sameenay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, waxay u ciyaareen qaab difaacasho halis ah, taasoo ciyaarta nagu adkeysay, sababa la xiriira ciyaartoyda aadka u badneyd”.
“Waxay ahayd ciyaar aad u adag, laakiin waxaan sugeynay fursada saxda ah, waxaana ku guuleysanay inaan ka hortagno halista ciyaarta”.
“Ousmane Dembélé wuxuu dhaawac kasoo gaaray dhanka canqowga lugta bidix, waxaanan rajeyneynaa inaysan noqon mid halis ah, waan rajeeneynaa in sidaas ay dhacdo, waxaan sugeynaa jawaabta ka soo baxda kadib baaritaanada caafimaad uu mari doono”.
“Waxay ahayd ciyaar aad u adag, sidaas darteed waxaan ku fikiray in aan soo galiyo Messi oo fadhiyay kursig keydka, si aan ugu badalo Carles Aleñá, isla markaana aan cadaadiska ugu kordhino kooxda Leganes”.
“Way iska cadahay in qof walba uu ka war qabo in Lionel Messi uu awoodo in uu badalo ciyaar kasta, laakiin waxaa muhiim ahayd kulankan inuu qeyb kaga noqdo kaliya 30 daqiiqo”.